सुदूरपश्चिमका अस्पताल : आइसियु न भेन्टिलेटर – Health Post Nepal
सुदूरपश्चिमका अस्पताल : आइसियु न भेन्टिलेटर
२०७७ वैशाख ४ गते १०:१७
प्रदेश सरकारको उपस्थिति फितलो
सुदूरपश्चिमको सेती प्रदेशिक अस्पतालमा यतिबेला पाँचजना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन्। विभिन्न समयमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनीहरूको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ।
सेती प्रदेशिक अस्पतालमा २४ बेडको आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। तर, त्यसभित्र अत्यावश्यक पूर्वाधार छैनन्। कोरोना संक्रमितालाई कतिबेला गाह्रो हुने हो र आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा राखेको उपचार गर्नुपर्ने हो थाहा छैन।
कोरोनाको संक्रमण फोक्सोमा हुन्छ। स्वास फेर्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो बेलामा बिरामीलाई आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, धनगढीमा त्यो अवस्था आए कोरोना संक्रमितले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने उच्च जोखिम छ। कारण, त्यहाँ न आइसियु छ न भेन्टिलेटर।
सेती अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेयले सरकारको निर्देशन अुसार अस्पतालमा २४ बेडको कोरोना उपचार कक्ष निर्माण गरिएको जानकारी दिए। ‘कोरोना उपचार कक्ष निर्माण गरिए पनि त्यहाँ उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु तथा भेन्टिलेटरलगायतका सामग्रीको अभाव छ। जसले गर्दा उपचारमा निकै समस्या खेप्नु परिरहेको छ,’ उनले भने।
उनले अस्पतालले पाँच बेडको आइसियु कक्ष निर्माण गरिरहेको र त्यो निर्माण हुन अझै दुई-तीन दिन लाग्ने बताए। यस्तो असहजताका बाबजुद पनि ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ गरी तीन समूहमा अस्पतालमा कार्यरत ६२ जना चिकित्सकहरू कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन्।
अस्पतालका प्रवक्ता डा. जगदीश जोशीका अनुसार त्यत्ति मात्र नभएर अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढे पिपिइलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुनेछ। उनले अस्पतालले भ्याएसम्मको काम गरिरहेको बताउँदै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार यतातिर चनाखो हुनुपर्ने बताए।
यो भन्दा धेरै बिरामी आए अस्पतालको स्रोत–साधनले नभ्याउने भन्दै अस्पताल प्रशासन चिन्तित बनेको छ। २ सय ४० बेड रहेको अस्पतालमा पहिलेदेखि नै चिकित्सकको अभाव थियो। अहिले अस्पतालले थप समस्या खेपिरेको छ। जबकि, अस्पतालसँग पहिलेदेखि नै १२–१५ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको कमी थियो।
‘प्रदेशका जुनसुकै ठाउँबाट पनि यहाँ बिरामीहरू आउँछन्। तर, सेवा सुविधा केही छैन। हामी आफैं समस्यामा छौं। यतातिर प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्‍यो,’ डा. जोशीले भने।
उता धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निर्पबहादुर वड पनि आफूले पटक–पटक मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, सचिवलगायत सम्बन्धित निकायमा भेन्टिलेटरलगायत अत्यावश्यक सामग्रीका लागि अनुरोध गरिरहेको बताउँछन्। उपमहानगरले भ्याउनेसम्मको सहयोग आफूले गरिरहेको भए पनि ठूला उपकरण र तयारीको लागि प्रदेश सरकारले नै अग्रसरता जनाउनु पर्ने मेयर वडले बताए। उनले जनशक्तिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्तताका लागि सबै गम्भीर र संवेदनशील हुनपर्ने बताए।
अस्पतालसँग पहिलेदेखि पाँच बेडको आइसियु र एक भेन्टिलेटर भए पनि त्यहाँ कोरोनाका बिरामीलाई राख्न नमिल्ने भएकाले निकै अप्ठ्यारो हुने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
सेतीमा एक जना मात्रै बेहोस गर्ने डाक्टर छन्। उनले अस्पतालमा आउने अन्य बिरामीलाई हेर्ने कि, कोरोनाका बिरामीलाई हेर्ने? अस्पतालमा स्पेसलिस्ट चिकित्सकको अभाव रहेकाले पनि समस्यमा छ।
तर, प्रदेश सरकार भने यी समस्यासँग बेखबरजस्तै छ। सुदूपश्चिम सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराजा सुवेदी पनि करोनाको उपचारका लागि अहिलेसम्म आइसियु तथा भेन्टिलेटर नरहेको स्वीकार्छन्। मन्त्री सुवेदी सामग्रीको अभाव रहेको कुरा पनि स्वीकार्छन्।
उनले सरकारले २० थान भेन्टिलेटर किन्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको जानकारी दिए। पाँच जनामा कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको अस्पतालमा द्रूत गतिमा काम हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले ‘सामग्री किन्ने निर्णय गरेका छौं’ मात्र भनिरहेको छ।
‘अस्पतालमा अत्यावश्यक चिकित्सकीय सामग्रीको पनि समस्या छ। किन्दा पनि पाइँदैन। निकै गाह्रो छ,’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘टेन्डर गर्दा पनि कसैले आवेदन दिएका छैनन्।’
अर्को कुरा, सरकारले अन्य बिरामीको उपचार हुने अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी राख्न नहुने आवाज उठिरहेका बेला अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्न नसक्नुले सरकारप्रति आक्रोस बढ्दो छ। सुदूरपश्चिम सरकारले सुविधासम्पन्न अस्पतालमा सामग्री नै पुर्‍याउन सकिरहेको छैन।
अस्पतालले पाँच बेडको आइसियु तथा भेन्टिलेटर तयार गर्दै छ। तर, प्रदेश सरकार भने किन्ने निर्णय गरेर टेन्डर आह्वान गर्ने लगायतका कुरामा अल्झिएको छ।